नौलो रेस्टुरेन्टमा रोबोट बन्यो वेटर ! | जनदिशा
नौलो रेस्टुरेन्टमा रोबोट बन्यो वेटर !
काठमाडौँ/ विश्वका विकसित देशमा रोबोट प्रयोगले मानिसका कामलाई सहज बनाइदिएको कुरा कुनै नौलो होइन । नेपालमा पनि अब रोबोट प्रयोग गरिएको रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ । दरबारमार्गमा खुलेको नौलो रेस्टुरेन्टले नेपाललाई रोबोट प्रयोग गरेर खानाको अर्डर लिने र सर्व गर्ने रेस्टुरेन्टको अभाव पूर्ति गरेको छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरङ क्याम्पसमा अध्ययनरत पाँच जना विद्यार्थी र दुईजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा लागिपरेका युवाको जमातले पाइला टेक्नोलोजीमार्फत ‘रोबोट’ प्रयोग गरेर प्रविधीमैत्री रेस्टुरेन्ट ‘नौलो रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । समूहका अनुसार नौलो सञ्चालनका लागि डेढ करोड रुपैयाँ लागत लागेको छ ।
नौलोमा ४८ जनालाई रोबोटले खानाका विभिन्न परिकार सर्भ गर्नेछ । बिहान ९ देखि राति १० बजेसम्म सञ्चालन हुने नौलोमा १३ जना कर्मचारी किचेनमा मात्र कार्यरत छन् । तीन जना कर्मचारी वेटर रहेको व्यवस्थापन पक्षले जानकारी दिएको छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषय पढ्दै विद्यार्थीहरूले उक्त रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रोबोटले टेबलबाटै डिजिटल प्रविधिमार्फत मेनु अर्डर गर्ने प्रणाली, अर्डर भएपछि रोबोर्ट आफैंले पानीदेखि परिकारसम्म सर्भ गर्ने संचालकको भनाइ छ ।
‘नौलो रेस्टुरेन्ट’को उद्घाटन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका थिए ।
Previous Previous post: संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागीताका लागि सरकारको निर्णय मान्य हुदैन : भिम रावल
Next Next post: कमजोर पौडेलको ‘बलियो कांग्रेस’ बनाउने सपना